Soomaaliland oo Sheegtay inay soo afjarayso muranka ka jira maamulka degmada Saylac. – Radio Daljir
Soomaaliland oo Sheegtay inay soo afjarayso muranka ka jira maamulka degmada Saylac.
Janaayo 10, 2013 7:34 b 0
Saylac, Jan, 10- Maamulka Soomalilaan ayaa sheegay inuu wado dadaalo lagu soo afjarayo xiisadda ka taagan degmada ?Saylac, taasi oo dibadbaxyo rabshado wata oo shalay kadhacay deegaankaasi uu ku geeriyooday 1-qof, 11 kalana ay ku dhaawacmeen rasaas ciidamada Soomaalilan ay ku fureen dadka dibadbaxa dhigayay.
Wasiirka gaashaandhiga ee Soomalilaan Axmed Xaaji Cadami oo waraysi siiyay radio Daljir ayaa sheegay si loo soo afjaro xiisadda Saylac ee kadhalatay doorashadii gudoomiyaha iyo kuxigeenka cusub ee maamulka degmada Saylac inay kulamo la leeyihiin labada beelood ee wax kala tabanaya ee deegaanka ku nool.
Wasiirka ayaa dhanka kale waraysigiisa ku soo hadal qaaday dhaqdhaqaaqyada kooxda Alshabaab ee buuraha Galgala oo dadka qaar ay aaminsan yihiin inay ka soo galaan deegaano ka mida Soomaalilan, arintaas ayuu ku tilmaamay mid aysan waxba ka jirin isla markaana aysan raali ka ahayn inay deegaanadooda soo maraan xooggaga Alshabaab.
Cadami ayaa tilmaamay inay bilaabayaan dhaqdhaqaaqyo ay kaga hortagayaan xooggaga Alshabaab oo laga soo qabsaday deegaano badan oo koonfurta Soomaaliya, kuwaasoo Soomaalilaan ay ku sheegtay inay qulqulka xooggagaasi ee deegaanada waqooyi bari inay saamaynayso Soomaalilaan.
Caawa iyo Daljir Khamiis, Jan 10, 2013. Khadar Cawl Ismaaciil ( Daljir Buuhoodle )
Wasiiradda arimaha dibadda Soomaaliya Fawsiya Xaaji Aaden oo safaro ku maraysa qaaradda Yurub.